ဝန်ကြီးချုပ်ထုတ်ပယ်ခံရပြီးနောက် အစိုးရအဖွဲ့အားဆန္ဒပြမှုကို တူနီးရှားစစ်တပ်က လုံခြုံရေးတင်းကြပ်စွာဖြင့် ပိတ်ဆို့ထား - Xinhua News Agency
တူးနစ် ၊ ဇူလိုင် ၂၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တူနီးရှားနိုင်ငံ တူးနစ်မြို့ရှိ အစိုးရရုံးများဆီသို့ ချီတက်လာသော ဆန္ဒပြသူများကို ဟန့်တားပိတ်ဆို့ရန် နှင့် အစိုးရလုပ်ငန်းခွင်များသို့ သွားရောက်ကြမည့် ရုံးဝန်ထမ်းများအား အကာအကွယ်ပေးရန်အတွက် တူနီးရှားနိုင်ငံ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ နှင့် စစ်တပ်က ယင်းနေရာများတွင် တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖြင့် တပ်စွဲထားကြောင်း သိရသည်။တူနီးရှားနိုင်ငံသမ္မတ Kais Saied က ဝန်ကြီးချုပ် Hichem Mechichi အားရာထူးမှ ထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်း နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ လွှတ်တော် အစည်းအဝေးအားလုံးကို ရပ်ဆိုင်းကြောင်း တနင်္ဂနွေနေ့ညနေပိုင်းတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် ယင်းကဲ့သို့ စစ်တပ် နှင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက တပ်စွဲမှု ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တူနီးရှားနိုင်ငံ Ennahda ပါတီထောက်ခံသူများ ဇူလိုင် ၂၆ ရက်တွင် လွှတ်တော်ဝင်းအပြင်ဘက်၌ စုရုံးဆန္ဒပြနေရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
သမ္မတ Saied က ၎င်းအနေဖြင့် ဝန်ကြီးချုပ်သစ်တစ်ဦး ခန့်အပ်ပြီးချိန်ထိ ယာယီ အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲအဖြစ် တာဝန်ယူထားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။ ထို့ပြင်သမ္မတက လွှတ်တော်အမတ်များ အားလုံးကို ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးကြောင်းလည်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
တနင်္လာနေ့ နံနက် အာရုဏ်ဦးတွင် တူနီးရှားလွှတ်တော်ဥက္ကဌ Rached Ghannouchi နှင့် ၎င်းနှင့်အတူ လိုက်ပါလာသည့် အခြားသော လက်ထောက်များကို တူးနစ်မြို့ Bardo ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အဦများထဲသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း မပြုနိုင်အောင် တူနီးရှားနိုင်ငံ အမျိုးသားစစ်တပ်က ဟန့်တားပိတ်ဆို့ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ လွှတ်တော်၌ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် အများအပြားဖြင့် တင်းတင်းကြပ်ကြပ်တပ်စွဲထားစဉ်အတွင်းမှာပင် လွှတ်တော်အပြင်ဘက်၌ တူနီးရှားနိုင်ငံသားများစွာစုရုံး၍ ဆန္ဒပြလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
တူနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့က လွှတ်တော်ထဲဝင်ရောက်ရန် ကြိုးပမ်းသည့် တူနီးရှား လွှတ်တော်ဥက္ကဌ Rached Ghannouchi ၏ မော်တော်ကားကို ဇူလိုင် ၂၆ ရက်က ဟန့်တားနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အာဖရိကတိုက်မြောက်ဖက်စွန်းတွင်တည်ရှိသော တူနီးရှားနိုင်ငံ၌ ကျန်းမာရေး ၊ စီးပွားရေး နှင့် လူမှုရေး အခြေအနေများ ဆိုးရွားစွာကျဆင်းနေခြင်းအပေါ် အမျက်ဒေါသထွက်ရာမှ အကြမ်းဖက်ဆန္ဒပြမှုများသည် တနင်္ဂနွေနေ့က တူနီးရှားနိုင်ငံအတွင်းရှိ ပြည်နယ်အများအပြားသို့ ကူးစက်ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီး ဆန္ဒပြသူများက Ennahdha party ပါတီအကြီးအကဲ လွှတ်တော်ဥက္ကဌ Rached Ghannouchi အား လွှတ်တော်တရားဝင်ရပ်ဆိုင်းရန် နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ရန် ကြွေးကြော် တောင်းဆိုခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
Tunisian army tightens security to protect gov’t after PM sacked
TUNIS, July 26 (Xinhua) — Tunisian security and military units were deployed to protect the government headquarters in Tunis by blocking all access and preventing officials from reaching their workplace in the government.
The measure came as Tunisian President Kais Saied announced on Sunday evening that he had removed Hichem Mechichi from the post of prime minister and suspended all activities of the Assembly of People’s Representatives, the parliament.
At dawn on Monday, units of the Tunisian National Army prevented Tunisia’s parliament speaker Rached Ghannouchi, accompanied by other deputies, from entering the parliament headquarters in the district of Bardo.
Amid tight security measures, dozens of Tunisians gathered in front of the parliament.
Violent protests broke out on Sunday in several Tunisian provinces as protesters expressed anger at the deterioration of the North African nation’s health, economic and social situations, calling for the departure of the government and the dissolution of the parliament chaired by Rached Ghannouchi, leader of the Ennahdha party. Enditem
(1)Photo taken shows Tunisian soldiers and military vehicles are stationed outside the Tunisian parliament building in Tunis, Tunisia, on July 26, 2021. (Photo by Adel Ezzine/Xinhua)
(2,3,4) Photos taken shows supporters of the Ennahda party gather outside the parliament building in Tunis, Tunisia, on July 26, 2021. (Photo by Adel Ezzine/Xinhua
(5)Photo taken shows Tunisian police banned the vehicle of Tunisian parliament speaker Rached Ghannouchi from entering the parliament building in Tunis, Tunisia, on July 26, 2021. (Photo by Adel Ezzine/Xinhua)■